Ny taona 1996 izy no tonga teto Madagasikara. Olona tsotra sy be fitiavana. Nahalalan’ny maro azy ny fanampiana ny mahantra. Tia miasa sy be herim-po. Olon’ny vavaka izy satria tsy nanakana azy hivavaka ny asa maro nankinina aminy. Asa tanana, asa saina, asa natao ho famonjena sy fanompoana ny hafa . Toetra notakian’i Don Bosco tamin’ny saleziana ireo ary niainan’i F. Elio. Miara-dia sy manohana mandrakariva ireo mpiara-miasa aminy izy.
Nandritra ny fahamehana ara-pahasalamana izao, izy no nizara ireo fanampiana ho an’ireo sahirana isaky ny talata sy zoma maraina. Nandray ny valisoany any an-danitra izy teo amin’ny faha-82 taonany.
F Abbio Elio, efa miandry anao any am-paradisa i Don Bosco !